जानकारी Archives | Nepali In Japan
10Apr By Nepali In JapanNo Comments
एजेन्सी । जापानी पासपोर्ट विश्वकै शक्तिशाली ठहरिएको छ । शीर्ष पासपोर्टको स्थानमा जापानसंगै सिंगापुर रहेको छ । यी दुई देशको पासपोर्ट हुनेहरुले विश्वका १९२ गन्तव्यमा बिना भिसा यात्रा गर्न सक्छन् । यसपछि दोस्रो स्थानमा जर्मनी र दक्षिण कोरिया रहेका छन् जसले पनि १९० गन्तव्यका लागि भिसा नलिइ भ्रमण गर्न पाउँछन् । यता अमेरिका चाहिँ बेल्जियम, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड, न्युजिल्यान्डसँगै छैठौँ स्थानमा छ । यिनीहरुले १८६ गन्तव्यमा भिजा–फ्रि तरिकाले यात्रा गर्न पाउँछन् । ‘हेन्लेज पासपोर्ट इन्डेक्स’ ले अन्तर्राष्ट्रिय यातायात संघले प्रदान गर्ने डाटाका आधारमा २००६ देखि नै सबैभन्दा यात्रा–मैत्री पासपोर्टबारे नियमित अध्ययन गरिरहेको छ । फर्मले संकलन गरेको डाटामा धेरै देशले अहिले आफ्ना प्रवेश नीतिहरुमा परिवर्तन ल्याइरहेको पाइएको छ भने कतिले युक्रेनियनहरुका लागि भिसाको आवश्यकता नै हटाइदिएका छन् । यस्...
9Apr By Nepali In JapanNo Comments
ढकमक्कै चेरीका रुखहरु, फुजी हिमाल जापान भन्ने बित्तिकै तपाईको मनमा यस्तै अनेक कुरा आउन सक्छ । हरेक ठाउँको बारेमा मानिसको मनमा कुनै न कुनै गलत धारणाहरु हुन्छन् । उक्त स्थानबारे जानकारी जति कम भयो त्यति नै यस्ता धारणाहरु बढ्ने सम्भावना हुन्छ । जापानको बारेमा पनि यस्तै खालका धारणाहरु व्याप्त छन् । आजको यस लेखमा हामीहरु जापानबारे व्याप्त ५ कुधारणाबारे कुराकानी गर्नेछौं । १. सबै जापानीहरु काठको घरमा बस्छन् । तपाईले टोकियोको पछिल्लो तस्विर हेर्नु भएको छ ? यहाँका गगनचुम्बी भवनहरु त देख्नु भएकै होला । तपाईले अंग्रेजी फिल्म द लाष्ट सामुराईमा देखे जस्तो सबै जापानीहरु काठकै घरमा बस्दैनन् । पछिल्लो समय इटा, स्टिल र कंक्रिटका घरहरु बनाउने क्रम बढेको छ । यसको अर्थ जापानमा काठको घर नै छैन भन्ने चाँहि होइन । अधिकांश घरहरुमा परम्परागत घरका विशेषताहरु तातामी कोठा, फुसुमास भने पाइन्छ । २. सबै जापानीहरुले ...
जागिर खोज्दा हामी प्रायः ‘करारको कर्मचारी’ भन्ने शर्तहरु देख्छौं । तर नियमित कर्मचारीभन्दा करारको कर्मचारी कसरी भिन्न छ । ? करारका कर्मचारी पनि पार्ट टाइम वा अस्थायी कर्मचारी जस्तै ‘अनियमित खालका कामदार’ हुन् । यिनीहरु नियमित कर्मचारी भन्दा फरक छन् । आजको यस लेखमा हामीहरुले नियमित र करारका कर्मचारीबीचको भिन्नताबारे कुराकानी गर्नेछौं । अनि करारका कामदारका रुपमा काम गर्दा सचेत रहनु पर्ने कुराहरु पनि औंल्याउनेछौं । नियमित र करारका कर्मचारीबीचमा रहेको भिन्नता रोजगारीको अवधि नियमित र करारका कर्मचारीका लागि फरक फरक हुन्छ । नियमित कर्मचारीको लागि कुनै निश्चित समय तोकिएको हुँदैन । यो अनिश्चित अवधिसम्म गर्न सकिने रोजगारी हो । यसमा कर्मचारीले सेवानिवृत्त नहुँदासम्म पूरा समय काम गर्दछ भन्ने अनुमान गरिन्छ । अर्कोतर्फ करारको कर्मचारी चाँहि निश्चित अवधिको लागि नियुक्त गरिएका हुन्छ । यिनीहरुको करारमै अ...
4Apr By Nepali In JapanNo Comments
१ .भीएफएसको वेबसाइटमा बूकिङसम्बन्धी जानकारी अहिले भीएफएसको बूकिङ वेबसाइटमा आउनेको संख्या दिनँहु असंख्य छ । वेबसाइटमा भिड धेरै हुँदा बूकिङमा समस्या भइरहेको छ । यसका कारण तपाईलाई कुनै असुविधा भएको हुन सक्छ । कहिलेकाँही तपाईले पहुँच बन्द छ भन्ने सन्देश पनि पाउनु भएको हुन सक्छ । वेबसाइटले थेग्न सक्ने भन्दा धेरै आगन्तुक आएकोले पनि यस्तो समस्या देखिन सक्छ । तपाईले यस्तो सन्देश पाउनु भएको छ भने केही क्षणपछि पुनः प्रयास गर्नु पर्दछ । सो समयका लागि छुट्याइएको अधिकतम् बूकिङ पूरा भइसकेर पनि बूकिङमा समस्या भएको हुन सक्छ । यसका कारण भीएफएसले हरेक दिन साँझ ४ बजेदेखि ५ बजेभित्र मात्रै बूकिङ लिँदो रहेछ भन्ने गलत धारणा पनि उत्पन्न भएको देखिएको छ । भीएफएसले दिनँहु चौबिसैं घन्टा बूकिङ लिन्छ । यसले नयाँ बूकिङ (अहिले बूकिङ खुल्ने १० कार्य दिन अगाडि) साँझ ४ बजेदेखि ५ बजेको बीचमा खोल्ने गरेको छ । यसको अर्...
27Mar By Nepali In JapanNo Comments
नुहाउनु जापानी संस्कृतिको एक हिस्सा हो । हुन त ओफुरो तथा ओनसेनहरुका बारेमा धेरै जानकारीहरु हाम्रो ब्लगमा प्रकाशन भैसकेका छन् । शरिरलाई स्वस्थ राख्न र मानशिक थकान कम गर्नका लागि ओफुरो नियमित बस्नु फाइदाजनक हुन्छ । आजको लेखमा ओफुरो, जापानी संस्कृतिमा यसको प्रतीक र घरमा यो कसरी गर्ने भन्नेबारे जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । ओफुरो के हो? ओफुरो नुहाउनका लागि प्रंयोग गरिने जापानी शब्द हो । अन्य राष्ट्रमा नुहाउने प्रकृयालाई स्वास्थ्य र सरसफाइसँग जोडेर हेरिने भएपनि जापानमा भने यो नुहाईसँगै रमाइलोको प्रतीक पनि हो । यसैले पनि जापानी घरमा पश्चिमा राष्ट्रमा भएको भन्दा भिन्दै प्रकारको बाथ टब हुन्छ । यो सानो तर गहिरो हुन्छ । यो निश्चित तापक्रममा पानी भर्ने किसिमको सुविधाका साथ पनि उपलब्ध हुन्छ । ओफुरो भन्दा अघि सावर लिनुपर्छ? ओफुरो नुहाउनुभन्दा पनि आफूलाई आराम दिने प्रकृया भएकाले यहाँ छिर्नु अघि राम्रो...
25Mar By Nepali In JapanNo Comments
तपाई जापानमा बसोबास गर्नु हुन्छ ? तपाईको साथमा माइ नम्बर कार्ड छ ? माइन नम्बर कार्ड लियो भने बढी कर तिर्नु पर्छ, भिसा आवेदन दिने बेलामा गाह्रो हुन्छ भन्ने गलत बुझाईका कारण कार्ड नबनाउने चलन देखिएको छ । तर यो कार्डका अनेक फाइदा छन् । यही एउटा कार्डबाट तपाईले धेरै काम गर्न सक्नु हुन्छ । माइ नम्बर कार्डलाई बीमा कार्ड, चालक अनुमति पत्र जस्ता महत्वपूर्ण कागजपत्रहरुमा समावेश गर्ने व्यवस्था गत वर्षबाट शुरु भइसकेको छ । एउटै कार्ड बोकेपछि अन्य कार्ड बोक्नु पर्ने झन्झट पनि हटेको छ । चालक अनुमति पत्रलाई पनि माइ नम्बरमा दर्ता गरेर त्यसैले चालक अनुमति पत्रको काम गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यो कार्ड छ भने आवास तथा परिवार दर्ता प्रमाण पत्र जस्ता आधिकारिक कागजपत्रहरु तपाई आफैंले कन्भेनियन्स स्टोरबाट प्रिन्ट गराउन सक्नु हुनेछ । अझै महत्वपूर्ण कुरा विदेशीहरुले कोभिड विरुद्ध खोप लगाएको प्रमा...
24Mar By Nepali In JapanNo Comments
कोभिड–१९ का कारण सीमामा लगाइएको प्रतिबन्धहरु बेला बेलामा परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसैले यसबारे केही द्विविधा उत्पन्न हुन सक्छ । पयर्टकहरुलाई अहिले पनि जापान छिर्ने अनुमति छैन । तर विदेश गएर फर्किने बासिन्दा, व्यवसायिक यात्री र विद्यार्थीहरुले भने छिर्न पाइरहेका छन् । तपाई पनि यसै मध्ये एक हुनु हुन्छ ? यदि हो भने तपाईको मनमा पनि नवआगन्तुकहरु विमानस्थलमा ओर्लिएपछि के के प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्ला भनेर जान्ने चाहाना होला । के हो फाष्ट ट्र्याक ? फाष्ट ट्र्याक जापान ओर्लिएका आगन्तुकहरुका लागि ल्याइएको नयाँ सेवा हो । यसले यात्रीहरुको समय बचाउँछ भने विमानस्थलको प्रक्रिया पनि छोट्याउँछ । तपाईले जापानमा अवतरण गर्नु अगावै माईएसओएस एपमार्फत विमानस्थलमा क्वारन्टिन उपायका लागि आफ्नो नाम पहिलै दर्ता गर्न सक्नु हुन्छ । यसका लागि मलाई के चाहिन्छ ? सबैभन्दा पहिला, तपाईले माईएसओएस डाउनलोड गर्नु पर्छ । यो ज...
कोभिड-१९ अर्धआपतकालिन नियमहरु हटेसँगै जापानले प्रवेश प्रतिबन्धका नियमहरुपनि खुकुलो बनाएको छ । जापानको सीमा प्रतिबन्धहरू परिवर्तन हुने क्रममा प्रवेश क्वारिन्टिन नियम थप खुकुलो बनाइएको छ । तपाईँलाई नवीनतम नियम परिवर्तनहरूबारे जानकारी दिनको लागि, हामीले जापानको हालको सीमा प्रतिबन्धहरू सम्बन्धी मार्च २१ तारिखसम्म परिवर्तित सामान्य अध्यागमन नियम र प्रश्नहरूको जवाफ समेटेका छौं । यसमा केही नियमहरु मार्च १ तारिखबाट नै लागू भइसकेका छन् र केही मार्च २४ तारिखबाट लागू हुँदैछन् । को जापान प्रवेश गर्न सक्छन् ? मार्च १ सम्म, विदेशी बासिन्दाहरू, व्यापार यात्रीहरू र विदेशी विद्यार्थीहरूलाई जापान प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको छ । तर सीमानाहरू दुर्भाग्यवश अझै पनि पर्यटकहरूका लागि बन्द छन् । यदि तपाईं जापानको फर्कने आवासिय वासिन्दा हुनुहुन्छ वा व्यापार वा अध्ययन उद्देश्यका लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने प्र...
20Mar By Nepali In JapanNo Comments
यस्तो छ टोकियोमा अर्ध-आपतकाल सकिएपछिको सम्भावित अवस्थाहरु
जापान सरकारले टोकियो समेत १८ प्रिफेक्चरमा लगाएको अर्ध - आपतकाल मार्च २१ देखि हट्ने क्रममा छ । टोकियोमा अर्ध–आपतकाल हटेको यो २ महीनामा वहिलो पटक हुनेछ । तर संक्रमण बल्झिने सक्ने सम्भावनाबीच थप केही समय भने टोकियोबासीहरुले केही सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ । टोकियोमा अर्ध–आपतकाल हट्नुको अर्थ निम्नानुसार हुनेछः - व्यवसायहरुको सञ्चालन अवधि घटाउन भनिने छैन । - रेस्टुरेन्ट र बारहरुलाई पनि कोभिड सम्बन्धी सुरक्षा प्रोटोकल अपनाउन निश्चित समयमा रक्सी बेचबिखन गर्न भनिने छैन । - सुरक्षा उपाय अपनाएका भनेर प्रमाण पत्र नपाएका रेष्टुराँ र बारहरुले बिहान ११ देखि राति ९ बजेसम्म मात्रै रक्सी बेच्न पाउनेछन् । - सुरक्षा उपाय अपनाएका भनेर प्रमाण पत्र नपाएका रेष्टुराँ र बारहरुले हरेक टेबलमा चार जनासम्मको समुहलाई २ घन्टासम्म माात्रै राख्न पाउनेछन् । - मार्च २२ देखि अप्रिल २४ सम्म संक्रमण बल्झिन सक्ने सत...
18Mar By Nepali In JapanNo Comments
जापानमा व्यवसाय गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि कम्पनीको संरचना छनौटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हचुवाकै भरमा कम्पनी खोलेका धेरै नेपालीहरुले अनावश्यक दुख पाएका र आवश्यकताभन्दा बढि लागत लागेका धेरै उदाहरणहरु जापानको नेपाली समुदायमा भेटिन्छ । त्यस्ता समस्याहरुबाट जोगिनका लागि लागि हरेक प्रकारका कम्पनीको क्षमता र सिमितताको बारे सहि बुझाइ हुन आवश्यक छ । आफ्नो कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याङ्कन र व्यवसायिक लक्ष्यबारे पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । जापानमा खाबुसिकी खाइस्या(केके) र गोदो खाइस्या (जीके) गरेर दुई प्रकारका कम्पनी विदेशीहरुवीच बढी परिचित छन् । यसमा पनि केके अझ बढी लोकप्रिय छ र यसमा ८० प्रतिशत सूचीकृत कम्पनी समावेश छन् । तर एउटा पक्ष अर्को पक्षभन्दा ‘उत्कृष्ट’ हुँदैन । दुवै प्रकारमा फाइदा र वेफाइदा हुन्छन् । खाबुसिकी खाइस्या (केके) भनेको के हो ...
जापानका ठूला शहरमा बस्ने व्यक्तिहरुका लागि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा र उपचारका अनेकौं विकल्पहरु उपलब्ध छ । यी मध्ये धेरै ठाउँमा त अंग्रेजी बोल्ने कर्मचारीहरु नै हुन्छन् । उनीहरु ले उपलब्ध गराउने सेवा, खुला रहने समय र आवश्यक अन्य प्रशासनिक सूचनाबारे फोनबाटै बुभ्mन सकिन्छ । तर अंग्रेजी भाषा बोल्ने मानिसहरु निकै थोरै भेटिने र यस्ता सुविधाका लागि आवश्यक व्यक्तिहरु नपाइने ग्रामीण क्षेत्रमा भने यस्तै खालका सुविधा नपाइन पनि सक्छ । जापानमा रहेका नेपालीहरुका लागि स्वास्थ्य सम्बद्ध धेरै जानकारीहरु हामीहरुले लेखिसकेका छौं । धेरैजनाले म्यासेजमा यस्तो–यस्तो भएको अवस्थामा कहाँ जाने, हस्पिटल जाने कि क्लिनिक जाने भनेर सोधिरहनुहुन्छ । वहाँ लगायत अन्य सबैका लागि उपयोगी होस् भनेर यो जानकारी तयार पारिएको हो । आजको यस लेख यसैमा केन्द्रीत छ । क्लिनिक कि अस्पताल ? जापानमा रहँदा धेरैले महशुष गर्ने महत्वपूर्ण कुरा...
वर्षको सबैभन्दा रमाइलो मौसम हो बसन्त ऋतु । तापक्रम विस्तारै बढिरहेको छ । फुलहरु फुलिरहेका छन् । हामी चाँडै नै जाडो यामको लुगा थन्काएर गर्मीयामको लुगा झिक्ने तयारीमा हुनेछौं । तर कसैकसैलाई भने यो मौसममा हे फिभर (खाफुन्स्यो) लाग्छ । बारम्बार हाँच्छियू आउँछ, आँखा चिलाउँछ अनि रुघाखोकी लाग्छ । यस वर्ष हे फिभरको सिजन यस अघिको भन्दा अलि चाँडै शुरु भएको छ । यति बेला परागका कणहरु जापानभर उडिरहेका छन् । यो क्रम मार्चको अन्त्यसम्म रहनेछ । बसन्त ऋतुको एलर्जीसँग लड्न तपाइले आफ्नो डाक्टरबाट पनि प्रेस्क्रिप्शन लिन सक्नु हुन्छ । तर आजको यस लेखमा यो एलर्जीसँग लड्दै यो मौसमको मज्जा लिन तपाइको लागि उपयोगी अनि जापानी बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने हे फिभरसँग लड्न आवश्यक एयर प्यूरिफायरदेखि फेशन मास्कसम्म १० वस्तुको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं । १. मास्क हे फिभरको तत्कालीन समान चाहिएको बेलामा मास्क तपाइको राम...
जापानमा अपार्टमेन्ट भाडामा खोज्दा धेरैले जोड दिने एउटै कुरा भनेको भाडा हो । तर भाडा भाडा मात्रै भनिरहँदा उनीहरुले जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गर्न सक्ने केही कुराहरुलाई भने वेवास्ता गर्ने गर्छन् । आजको यस लेखमा हामीहरुले पहिलो पटक जापानमा अपार्टमेन्ट खोज्दा ध्यान दिनु पर्ने वा थाहा पाइराखे उपयोगी हुने केही कुराहरु बताउन गइरहेका छौं । १. लोकल स्टेशन नजिक बसाईको अर्थ यात्राको लागि धेरै समय म पहिलो पटक जापान आउँदा मैले अपार्टमेन्ट २ ओटा कुरामा ध्यान दिएर लिएको थिएः पहिलो भाडा अनि दोस्रो कामका लागि लाग्ने कुल वन-वे यात्रा समय । यो समय लगभग एक घन्टा जति लाग्छ भन्ने मेरो आकलन थियो कम्तिमा पनि मैले यस्तो सोचेको थिएँ । मेरो अपार्टमेन्ट नोगाताबाट हिटेर करीब १५ मिनेटमा पुगिन्थ्यो । नोगाता सेइबु–शिन्जुकु लाइनको एउटा लोकल स्टेशन हो । मैले यात्रा गर्ने क्रममा (सेइबु शिन्जुकु) को टर्मिनल स्टेशनबाट यामान...